UTwitter usungula ukudibanisa, indlela entsha yokufumana iiakhawunti ukuba uzilandele | IPhone iindaba
I-Twitter isungula ukudibanisa, indlela entsha yokufumana iiakhawunti oza kuzilandela
Njengomgaqo ngokubanzi, bonke abasebenzisi be-Twitter, ubuncinci abo bathanda ukugcina ucwangco kwaye banolwazi ngalo lonke ixesha ngezinto abanomdla kuzo kwaye basebenzise esi sicelo njengomthombo wabo ophambili wolwazi, idla ngokuba nenani elincinci labantu ekufuneka belilandele. Ngokukodwa, ndijonga kakhulu kwiakhawunti endizakuyilandela ukuze ndiqiniseke ukuba izakundinika ulwazi oluluncedo okanye enxulumene nezinto endizithandayo, kungenjalo, ndiza kulandela enye yeeakhawunti ezininzi kangangokuba konke oku kuthunyelweyo Amampunge kumhla wam wexesha, kwaye ndicinga ukuba uninzi lwenu luya kucinga njengam.
I-Twitter ibimile kubasebenzisi abazizigidi ezingama-300 ixesha elide kwaye ngaphandle kweendaba zokuba uJack Dorsey, umphathi omtsha we-Twitter, ebesongeza kwiinyanga ezidlulileyo, akukho ndlela yokwandisa inani labasebenzisi. Ukuzama ukukhuthaza abasebenzisi bangoku nabatsha, inkampani isungule inkonzo entsha ebizwa ngokuba yi-Connect, ethi, nangona ingeyonto intsha ngokupheleleyo, yahlule ukusebenza kwayo kuthathelwa ingqalelo izinto ezininzi eziguquguqukayo.
Lo msebenzi uqaliswe izolo yinkampani, wenziwa kancinci kancinci kuwo onke amazwe, ke ukuba awunayo, kuya kufuneka ulinde iiyure ezimbalwa okanye mhlawumbi iintsuku ukuze ube nakho ukwandisa inani abantu ababalandelayo, qhubeka. Qhagamshela usebenzisa ulwazi lwabantu obalandelayo, ezona akhawunti zibalulekileyo kwindawo yakho, ii-tweets ozithandayo, iindaba zamva nje ... ukucebisa, ngale thebhu intsha, Zeziphi iiakhawunti onokuba nomdla wokuzilandela?.
Ukuze ukwazi ukukhangela ukuba sele unawo lo msebenzi mtsha wenziwe ukuba usebenze, kufuneka uvule usetyenziso kwaye uye kwi iqhosha lasekhohlo lesikrini, apho sicofa khona xa sifuna ukongeza umntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Twitter isungula ukudibanisa, indlela entsha yokufumana iiakhawunti oza kuzilandela
IPieMessage: I-iMessage ka-Apple kwi-Android [Ividiyo]
Iinkcukacha zoKuqala ze-Apple Music zityhilwe